Abameli nesivimbelo sengoma yonyaka oKhozini - Ilanga News
Home Izindaba Abameli nesivimbelo sengoma yonyaka oKhozini
Abameli nesivimbelo sengoma yonyaka oKhozini
U-Owen Ndlovu usenqumele i-sabc ugwayi katiki
Umnu Owen Ndlovu uthi ngeke ibekhona ingoma ezohlukanisa unyaka (ngohlelo lokuvota) oKhozini uma lo msakazo usaqhubeka nokusebenzisa umbono wakhe
wokuthi abalaleli besiteshi mabavote.
AVOTA enengebhe yokuthi kuzocwila imali yawo amabhinca ohlelweni lwengoma ezohlukanisa unyaka oKhozini FM njengoba uMnu Owen Ndlovu we-Michael Owen Productions esenqumele iSABC ugwayi katiki ngencwadi yabameli ethi kuzomele ihoxise isikhangiso esikhuthaza abalaleli ukuba bavote.
Ongaphansi nongaphezulu phakathi kweSABC noMnu Ndlovu abameli bakhe abathumele incwadi ekomkhulu leSABC, eGoli, ngo-Lwesibili bethi mawungashayi umhla ka-27 kwephezulu sisekhona lesi sikhangiso.
U-Adv MacGregor Kufa weMachaba Attorneys, omele uMnu Owen Ndlovu, utshele ILANGA ukuthi uma iSABC iqhubeka nalesi sikhangiso, bazofaka isicelo esiphuthumayo enkantolo sokumisa lolu hlelo.
“I-SABC kayinalo ilungelo lokuqhubeka nalo mqhudelwano ngoba kuyaziwa ukuthi ngokwamaphepha nesivumelwano esisayiniwe, le nto ngekaMnu Owen Ndlovu,” kusho u-Adv Kufa.
UMnu Ndlovu utshele leli phephandaba ukuthi ngeke ibekhona ingoma ehlukanisa unyaka (ngohlelo lokuvota) oKhozini uma lo msakazo usaqhubeka nokusebenzisa umbono wakhe wokuthi abalaleli besiteshi mabavote.
Uveze ukuthi phezu kokuba bewuvimba umsakazo ukuba uqhubeke nalokhu, bafuna u-R50 million wokuthi iSABC yambambisa amaqubu entenetsha nyakenye, yathi makakhiphe udaba enkantolo luxoxelwe ngaphandle, ayivumele nokuthi kusale sekumenyezelwa imiphumela yanyakenye yokunqoba kukaSenzo “Ntencane” Zondi.
“Ukuphela kwesivumelwano sokusebenzisana neSABC ngo-2018, akusho ukuthi mayiqhubeke nokusebenzisa umqondo wami. Eminyakeni edlule uma bekuzohlukaniswa unyaka, kwakuhlangana abasakazi baziqokele ingoma abayithandayo, kwathi ngo-2012 ngafika naleli cebo, iSABC yalithanda.
“Ngo-2016 ngaze ngathola abaxhasi ababezokhipha imoto nemali kumuntu owinile. Mina kangivimbi ukuthi uKhozi FM luzenzele i-top 10 yalo, kodwa hhayi evotelwe ngemali ngoba yinto yami leyo eyabhaliswa ngokusemthethweni. Kangisoze ngivume bangiqhwage ibhizinisi lami,” kusho uMnu Ndlovu.
Uthi ngokwesivumelwano sakhe neSABC ngesikhathi kuqalwa lo mncintiswano lolu hlelo lwakhe kwakuthiwe luzosetshenziswa kuzona zonke iziteshi eziwu-19 zale hlangano kanjalo nakumabonakude.
Utshele ILANGA ukuthi akanankinga nezinye iziteshi, kodwa ubhekene ngqo noKhozi FM. Uthi kwathi engasaboni ngasolinye nalesi siteshi, wabhuqwa ezikhangisweni zaso kuthiwa yiso kuphela esisemthethweni esihlukanisa unyaka, abanye mabathule.
“Uma kwaphela isivumelwano esasinaso, akusho ukuthi mabahambe nento yami. Okwakithi makusale kithi, nabo basale nomoya wabo lona obukade usihlanganisile.
“Akekho omunye umuntu onelungelo lokwenza lo mncintiswano wokuvotisa kwaSABC ngoba ngisho kumabonakude babeyicele kimina imvume yokusakaza bukhoma ukuwina kukaMroza “Van Damme” Fakude, okwathi uma sekunezinkinga bathi ngeke basakaze kwazise bayawazi amalungelo ami,” kusho uMnu Ndlovu.
UMnu Mhlengemali Mthembu oyinduna yabalandeli kumasikandi, uveze ukuthi sebebhalele umphathi wesiteshi oKhozini bezwakalisa ukunganeliseki kwabo ngalo mdonsiswano.
“Sivota ngokwesaba, kasifuni ukuphindwa ngokwangonyaka odlule. Sithokozile ngokuthi kulo nyaka basifakele abaculi ababili bakamasikandi emncintiswaneni, kodwa lo mdonsiswano kawusiniki ukuthula.
“Besicela iSABC yenze isitatimende esikhuluma ngazwilinye noMnu Ndlovu, bayeke ukumemezana emaqeleni,” kusho uMnu Mthembu.
ILANGA liyibonile incwadi yabameli bakaMnu Ndlovu okuthiwa ithunyelelwe iSABC ngalo mncintiswano.
Okhulumela iSABC, uNkz Mmoni Seapelelo, uthe bayakuqinisekisa ukuthi inkontileka yokusebenzisana neMichael Owen Productions yaphela ngo-2018 kayizange ivuselelwe.
Uthi wonke amalungelo ayeshiywe yile nkampani adayiswa athengwa. Uveze ukuthi iSABC izokwenza okusemandleni ukuzivikela kulolu daba. Unxuse abalaleli ukuba baqhubeke nokuvotela ingoma ezohlukanisa unyaka.
ILANGA libuyele kuMnu Ndlovu ukuzwa ukuthi adayiswa ngempela yini amalungelo alolu hlelo, wathi uhubhu kabhejane lowo.
Previous articleSichithwe yinkantolo esikaDudu Myeni
Next articleLibizwe ngenina igcokama